Zita Rako Ririmo Here muPanama Papers?
Vanhu vakawanda vari kutaura pamusoro penyaya dzemazita evanhu vari kubuda muPanama Papers.
Studio7 imwe yemakambani anodarika zana ari kuongorora zviri mumagwaro eMossack Fonseca, ayo akapihwa bepanhau rekuGermany, reSueddeutsche Zeitung, nemunhu asiri kuda kuzivikanwa zita rake.
Bepanhau iri rakaita mushandira pamwe neInternational Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, mukuongorora zviri mumagwaro eMossack Fonseca.
ICIJ yakazokoka masangano enhau anodarika zana, kusanganisira VOA Zimbabwe Service (Studio7)